Godina Harargee Bahaa Aanaa Baabbileetti Konfiransiin nageenyaa geggeeffame - NuuralHudaa
Home/Odeeyfannoo/Godina Harargee Bahaa Aanaa Baabbileetti Konfiransiin nageenyaa geggeeffame
Godina Harargee Bahaa Aanaa Baabbileetti Konfiransiin nageenyaa geggeeffame
Godina Harargee Bahaa aanaa Baabbileetti waldhabbii kanaan dura hawaasa daangaa naannolee Oromiya fi Somaalee irra jiraatu jiddutti muudatee ture araaraan furuuf, konfiransiin nageenyaa kan geggeeffame tahuu gabaafame.
Konfiransii kana irratti hogganaan Biiroo Bulchiinsaa fi Nageenya Oromiyaa Birgaadeer Jeneraal Kamaal Galchuu, gama naannoo Somaalee irraa ammoo hogganaan Biiroo Bulchiinsaa fi Nageenya naannichaa, akkasumas Abbootiin Gadaa, Ugaasonni fi jiraattonni naannoolee lamaanii kan hirmaatan tahuu odeeyfannoon ni addeessa.
Akka namni konfiransii kana irratti hirmaatee bilbilaan nuuf himetti:
“Konfiraansii kana irratti wal dhabbii ummata obboleeyyan lamaan jidduu ture dhaabsisuuf labsiin dhukaasa dhabuu labsamee jira, araarris bu’ee jira” jedhe.
Dabalataanis ummanni gama lamaan irraa sababa waldhabbii kanaatiin qe’ee fi qabeenya isaa irraa buqqifamee ture, yeroo gabaabaa keessatti akka qe’ee isaaniitti deebi’an godhuufis walii galamee jira jedhe.
Baabbilee Harargee Bahaa
May 26, 2020 sa;aa 1:44 pm Update tahe